UNESCO Sites Heritage World In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > UNESCO Sites Heritage World In Europe
Europe waa badan yahay goobaha UNESCO Heritage World soo jiidan malaayiin dalxiisayaasha. Waxaa jira a kala duwan oo ka mid ah indhaha si aad u aragto - laga bilaabo dhismayaasha dhismaha iyo dhaqanka illaa yaababkii dabiiciga ahaa ee Qaaraddii Hore.
Iyada oo meelo badan oo uu ka soo xusho, waxay noqon kartaa wax adag, waayo, nin socoto ah in la sameeyo go'aan ku saabsan halka loo socdo. Si lagaaga caawiyo in aad doorato oo goobaha UNESCO Heritage World Yurub marka hore aragto, waxaan diyaarinay liis xul ah:
Goobaha Heritage World UNESCO ee France
Qaar ka mid ah goobaha ugu UNESCO Heritage World ee France ka mid ah yaabab sida Versailles ah. Waa meesha ugu caansan uguna quruxda badan boqortooyada France. Meel kale oo qurux badan ku xuso waa Church Abbey ee Saint-SAVIN-Suur-Gartempe. Waa kaniisad Romanesque ka qarnigii 9aad ee Poitou, Aquitaine cusub.
Waayo, dadka safarka ah oo jecel in ay arkaan waxyaabaha diinta, sidoo kale waxaa jira Cathedral Chartres ah. Tani Roman taariikhaha cathedral Catholic ka qarnigii 13aad, oo waxaad ka heli kartaa koonfur Paris. Ugu dambeyntii, waxaa jira Gutaa Saint-Michel iyo bay. Waa jasiirad la qalcad istiraatiiji shukaansi ka 8 AD, la a keniisad sida dhismeedkooda ugu weyn.
Paris ilaa Tareenka Sare ee Lyon
Goobaha Heritage World UNESCO ee Italy
Italy waxaa ka buuxa goobaha UNESCO Heritage World, si aan u xuso doonaa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican u yaqaan. Joogitaankeena ugu horeeya waa goobaha qaddiimiga ah ee Pompei, Herculaneum, iyo Torre Annunziata. Ay muhiimadda been in xaqiiqda ah in ay yihiin hadhaagii hore ee magaalooyinka la aasay qarax ee Mt. Vesuvius in 79 AD. Waxa kale oo jira Castel del Monte, shukaansi qalcaddii ka qarnigii 13aad a. Tan waxay isku khaladday saamayn of European Cistercian Gothic iyo Muslim naqshadaha, waa hortiisa xiiso.
Intaas waxaa sii dheer, Sidoo kale Italy waxay hoy u tahay Piazza del Duomo in Pisa, munaaraddii tiirsan caan. Ugu dambeyntii, waxaa jira ee taariikhiga ah xarumaha laba magaalooyinka waaweyn, Florence iyo Rome. In Florence, dhismayaasha oo ka dhigan qaab naqshadaha Renaissance tahay waa-arki. Ha ka maqnaan Uffizi ah, Basilica ee Santa Croce, iyo Florence Cathedral ee. In Rome, aad leedahay si ay u sahamiyaan xarunta of Boqortooyada Roomaanka iyo dunida Catholic tiro badan taxadiri iyo goobaha dhaqanka.
Germany waa dal ee Daar wayn, cathedrals, iyo goobaha kale cajiib ah UNESCO World Heritage. Aachen Cathedral is the burial place of Charlemagne and the first-built vaulted structure since antiquity. The astaamaha ugu caansan Jarmalka gudaheeda waa cathedral kale, this mid ka mid ah Cologne. Inay qaadatay qarniyo in la dhiso bilaabo 1248. Intaas waxaa sii dheer, soohdimaha Boqortooyada Roomaanka sidoo kale waxay mudan yihiin booqasho. Qof walba waa arki Hadrian Wall iyo Antonine Wall, kaas oo la dhisay 122 AD iyo 142 AD, siday u kala horreeyaan.
Rhine sahaminta Sare Dhexe Valley waxa uu noqon doonaa la ilaawi karin ah waayo-aragnimo. Gobolka Tani waxay hoy u tahay tiro badan oo ah Daar wayn iyo magaalooyinka taariikhiga ah. Ugu dambeyntii, waxaa jira Wurzburg deganaanshaha la Gardens Maxkamadda iyo Degitaanka Square. Waa mid ka mid ah daaraha waaweyn ee Germany ugu weyn, Tusaale weyn ee style Rococo.
Kuwani waa uun dhawr ka mid ah goobaha badan oo cajiib ah UNESCO World Heritage ee Europe. Iyada oo talooyin our, qalad ah ma waxaad tagi kartaa qabanqaabada safarkaaga. Waxaad gaari karo goobahaas tareen ka kala duwan oo waaweyn magaalooyinka Yurub.
Diyaar si ay u sahamiyaan waxa Europe leeyahay in ay bixiyaan? Qorsheyso booqashadaada goobaha caanka UNESCO Heritage World iyo jartaan tikidhka tareenka aad maanta!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix:https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funesco-world-heritage-sites-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
europetravel longtrainjourneys trainjourney Tranride Talooyin safarka tareenka travelfrance travelgermany travelitaly unesco